के–के हुन् मार्सी चामलका विशेषता? - Everest Dainik - News from Nepal
के–के हुन् मार्सी चामलका विशेषता?
काठमाडौं । मार्सी सीमित मात्रामा उत्पादन हुने जुम्लाको स्थानीय जातको धान हो । यो धान समुद्र सतहबाट करिब तीन हजार मिटर उचाइको क्षेत्रमा उत्पादन हुने गर्छ । यसै धानबाट मार्सी चामल बन्छ । यसको रङ प्रायः रातो वा खैरो हुन्छ ।
राणा शासनकालमा केन्द्रमा रहेका शासकहरूलाई जुम्लाबाट प्रत्येक दिन एक माना चामल हुलाकीमार्फत काठमाडौं ल्याइने गरिन्थ्यो । पछि गएर यो विस्तारै कम व्यवसायिक भयो र महत्व पनि घट्दै गएको पाइन्छ ।
अहिले बजारमा मार्सी चामलको माग बढ्दो पाइन्छ । यसले गर्दा यो पुनः व्यावसायिक हुँदै छ । बिक्री–वितरणसमेत ह्वात्तै बढेको छ । काठमाडौंका प्रायः ठाउँमा यो चामल किन्न सकिन्छ । यसको मूल्य प्रतिकेजी दुई सय ५० छ । यो जानकारी नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
– मार्सी धान उत्पादन गर्न किसानहरूलाई झन्डै आठ महिना लाग्छ । पौष्टिक तत्वले भरिपूर्ण हुने भएकाले मार्सी चामल स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी छ ।
– मार्सी चामलमा फाइबरको मात्रा बढी हुने भएकाले शरीरमा चिनी र रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्छ । मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामीका लागि यसको सेवन एकदमै प्रभावकारी हुन्छ ।
– मार्सीमा चामलमा भन्दा बढी आइरन, स्टार्च र सेलेनियमको मात्रा हुन्छ । त्यस्तै अरूको तुलनामा लस्सेदार र स्वादिस्ट पनि हुन्छ । सञ्जु तिमल्सिना ,सञ्चालक श्रेया जनरल स्टोर्स एन्ड सप्लायर्स